चिचिला २ का पूर्ण बहादुरलाई उपचार खर्च अभाव
खाँदबारी । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं. २ इम्चोङका पूर्णबहादुर राईलाई उपचार खर्च अभाव भएको छ । दुवै मृगौला फेल भएका राईलाई खर्च अभाव भएपछी उपचार गर्न समस्या हुन थालेको उपचार रकम संकलन कर्ता हर्कसिं राईले बताए । गत वर्ष देखिनै उपचार गराई रहेका राईको आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकै कारण दिनानु दिन उपचार असम्भव बन्दै गइरहेको छ ।
ग्रीनसिटी अस्पताल काठमाण्डौमा उपचार गराई रहेका राईलाई उपचार खर्च जुटाउन विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुबाट दाताहरुलाई आह्वान गरिएको थियो । उक्त अभियानबाट हालसम्म ४ लाख ५० अजार रुपैंया रकम संकलन गरिसकेको छ । तर उक्त अभियानमा समेत उपचारका लागि आवश्यक रकम संकलन हुन नसकेपछी राईको उपचारमा थप समस्या हुँदै आएको हर्कसिं राईले बताए । ३६ वर्षका उनको सानो छँदा दुवै आँखाको दृष्टी गुमेको थियो । गत वर्ष वैशाखमा मुटुको समस्याका कारण उनकी ७ वर्षकी छोरीले मृत्युवरण गर्नुप¥यो, पैसा अभावले उपचार पनि गर्न सकिएन, हर्र्कले भने । उनका ११ वर्षका छोरा आफन्तकोमा बस्दै आएका छन् भने श्रीमती वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत गएकी छिन् । तर उनको पनि भरपर्दो कमाई नभएपछी श्रीमान्को उपचारमा सहयोग गर्न नसकेको बताए ।
उनलाई हप्तामा दुई पटक डाग्नोसिस गराई रहनु परेको छ । जसका कारण हप्तामा ६० हजार रुपैंया खर्च हुने गरेको छ । दाताहरुबाट प्राप्त रकम डाइग्नोसिस गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको हर्कले बताए । डाक्टरको सल्लाह अनुसार अब मृगौला प्रत्यारोपणका लागि करिब २० लाख रुपैंया खर्च लाग्ने छ । कोही दाता तथा संस्थाहरुले उनको उपचारमा सहयोग गर्न हर्कले अनुरोध गरेका छन् । सहयोगका लागि पूर्ण बहादुरकी बहिनी मनिशा राईको नाममा बैंक अफ काठमाण्डौ खाँदबारी शाखाको खाता नंं. ०७४२०००००३०५५२४ मा सहयोग गर्न उनले आह्वान गरे ।